အေဒင်ပင်လယ်ကွေ့အစောင့်အရှောက်တာဝန်များပြီးဆုံး၍ တရုတ်ရေတပ်သင်္ဘောအုပ်စု ပြန်လည်ရောက်ရှိလာ - Xinhua News Agency
အေဒင်ပင်လယ်ကွေ့အစောင့်အရှောက်တာဝန်များပြီးဆုံး၍ တရုတ်ရေတပ်သင်္ဘောအုပ်စု ပြန်လည်ရောက်ရှိလာ
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အထူးကုပြင်ပလူနာဌာနများသို့ ပြသမှုအား ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်မှစ၍ Online Booking စနစ်ဖြင့် စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်မည်
အာရှဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်း အပြီးသတ် လူရွေးချယ်
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကွမ်ရှီးပြည်နယ်၊ပေဟိုင်တွင် နှစ်ထောင်ချီ ဂူသင်္ချိုင်း ၂၀၀ ကျော် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့
ပုဂံချူအင်လိုင်းတန်ဆောင်း ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းစီမံကိန်း စတင်ဆောင်ရွက်
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်လျှောက်ထားရန် နဂို သတ်မှတ်ရက်အစား ၂၀၂၂ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက် အထိ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု ထုတ်ပြန်
၂၀၂၂ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်းထုတ်ပြန်
ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်မှ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်အတွင်း တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် အချို့တွင် အချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာနိုင်
ယခုလက်ရှိမှ လာမည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း အားအသင့်အတင့်ရှိသော လာနီညာအဆင့်တွင် ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် မြေစာပုံပြိုကျမှုကြောင့် လူ ၈၀ ကျော် ပျောက်ဆုံးနေ
မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် တို့ နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးအပါအဝင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ အာဆီယံအရေးများ ဆွေးနွေး
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာနိုင်ငံ နေပြည်တော်သို့ရောက်ရှိ
ဟောင်ကောင်ဥပဒေပြုကောင်စီရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်အား စနစ်တကျ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးပြုလုပ်ရန် လုံးဝမဖြစ်နိုင်
အရက်၊ ဘီယာ၊စီးကရက်၊ မော်တော်ယာဉ်၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ် နှင့် လုပ်ငန်းသုံး သကြားတင်သွင်းခြင်း ကိစ္စရပ်များမှအပ ကော်မရှင် ၏ ထောက်ခံချက် မလိုအပ်တော့ကြောင်း ထုတ်ပြန်
အာရှချန်ပီယံလိဂ် နှင့် AFC Cup ပြိုင်ပွဲတို့တွင် မြန်မာဘောလုံးကလပ်အသင်းများ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရမည်
ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံက ကြီးမားစွာ အထောက်အကူပြုရေး သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန် ကတိပြု
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က အလယ်ပိုင်းဒေသ စစ်ဌာနချုပ် သို့သွားရောက်စစ်ဆေးကြည့်ရှု
တရုတ်နိုင်ငံက တွန်ဂါနိုင်ငံအား အကူအညီအသစ်များ ပေးပို့မည်
တရုတ်နိုင်ငံက နှင်းမုန်တိုင်း ကျဆင်းမှုအတွက် အဝါရောင် သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်
အာကာသစခန်း ပူးပေါင်း လေ့လာဆောင်ရွက်မှုတွင် နိုင်ငံတကာအား တရုတ်နိုင်ငံက ကြိုဆိုကြောင်း စက္ကူဖြူစာတမ်း ဖော်ပြ
ဧကရာဇ်ဘုရင် ချင်ရှီဟွမ် ဂူသင်္ချိုင်း မြေရုပ်တုစစ်သည် အမှတ်(၁)တွင်းကြီးတွင် စစ်သည်ရုပ်တု ၂၀ ကျော် ထပ်မံတွေ့ရှိရ
အနီရောင် နွေဦးပွဲတော်နှစ်ချိုးစပ်စာတန်း များဖြင့် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနွေဦးပွဲတော်ကိုကြိုဆိုကြ
၂၈ ကြိမ်မြောက် နှင်းပန်းပုရုပ်တု ထုဆစ်ခြင်းပြိုင်ပွဲတွင် အဖွဲ့ပေါင်း ၁၉ ဖွဲ့မှ ပြိုင်ပွဲဝင် ၆၀ နီးပါးဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်
တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်းပြည်နယ်၏ ကျောက်ပန်းပုလက်ရာများ
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းတွင် နှစ်ပေါင်း ၃၀၀၀ သက်တမ်းရှိ မျိုးနွယ်စုသုသာန်အား ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံ ၏ ရထားလမ်းစသည့်ဌာနများက နှစ်ကူးနွေဦးပွဲတော်ခရီးသွားလာမှု လုံခြုံရေးအာမခံချက် နှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို အားဖြည့်လုပ်ဆောင်
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းက တိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်ကို ထိန်းသိမ်းထား
တရုတ်နိုင်ငံ၏ 5G ဖုန်းတင်ပို့မှု ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တရှိန်ထိုး မြင့်တက်လာ
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ် ကူမင်း-ချူရှုန် အမြန်အဝေးပြေးလမ်းသစ်ဖွင့်လှစ်
တရုတ်နိုင်ငံက တွန်ဂါနိုင်ငံသို့ ငွေသားနှင့် အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးပေးအပ်
တရုတ်နိုင်ငံသည် စွန်ပစ်ပစ္စည်းများ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအား မြှင့်တင်ရန်ဆောင်ရွက်
ဂေဟပတ်ဝန်းကျင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံ ဟိုင်နန်ပြည်နယ် ဆန်းရတွင် သန္တာကျောက်တန်းများ ပင်လယ်တွင်းသို့ နေရာချထား
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း နှင့် ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့အကြား ကုန်တင်ရထားလမ်းကြောင်းသစ် ဖွင့်လှစ်
လူလိုက်ပါသော အာကာသယာဉ်စီမံကိန်းများ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ကာ တရုတ်အာကာသစခန်း ဘက်စုံတည်ဆောက် လည်ပတ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု စက္ကူဖြူစာတမ်းက ဖော်ပြ
ဆူနာမီဒဏ်ခံခဲ့ရသော တွန်ဂါနိုင်ငံသို့ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထောက်ပံ့ရေးအကူအညီများ ရောက်ရှိလာ
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိ နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Antony Blinken ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ဆွေးနွေး
တရုတ်နိုင်ငံက လကမ္ဘာနှင့်ဂြိုဟ် လေ့လာစူးစမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်သွားမည်ဟု စက္ကူဖြူစာတမ်းတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထား
“အာကာသအင်အားကြီးနိုင်ငံအနာဂတ်ဆီသို့”— 《၂၀၂၁ ခုနှစ် တရုတ်နိုင်ငံ၏အာကာသ》 စက္ကူဖြူစာတမ်းအား တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးရုံးမှ ထုတ်ပြန်
တရုတ်နိုင်ငံက ကုန်းမြေလေ့လာရေးအတွက် L-SAR 01A ဂြိုဟ်တုအား လွှတ်တင်
တရုတ်နိုင်ငံက ရုပ်ထွက်မြင့်မားသော ဘက်စုံစနစ်သုံးပုံရိပ်ဖမ်းဂြိုဟ်တု အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်
နွေဦးပွဲတော် အကြိုတွင် တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က ဆန်းရှီးပြည်နယ်ရှိ အောက်ခြေ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်နှင့် ပြည်သူများအား အားပေးနှစ်သိမ့်သောအားဖြင့် သွားရောက်ကြည့်ရှု
တရုတ်-လာအို ရထားလမ်းစီမံကိန်း အဓိကလမ်းတံတားများအား တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းပြုပြင်ပေးနေသည့် နည်းပညာရှင်တစ်ဦး၏ လုပ်ငန်းခွင်ပုံရိပ်များ
တရုတ်နိုင်ငံက WHO သို့ တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးပညာဖြင့် ကိုဗစ်ရောဂါကုသရေးဆိုင်ရာ သုတေသအစီရင်ခံစာ တင်ပြ
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ချင်းဟိုင်ပြည်နယ်၊ ယူရှုလေဆိပ်တွင် ခရီးသွားအဝင်အထွက်ပမာဏ စံချိန်တင်မြင့်မားခဲ့ရာ လေကြောင်းဖြင့် ခရီးသွားလာမှုသည် ဒေသတွင်း အရည်အသွေးမြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ပေး
ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ကျေးရွာများကို ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်က တရားဝင်ဖွင့်လှစ်
ပေကျင်းဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ရှီ တက်ရောက်မည်
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိုလံပစ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ Thomas Bach တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိုလံပစ် ကော်မတီ ဥက္ကဌ Thomas Bach ပေကျင်းမြို့သို့ ရောက်ရှိ
ပေကျင်းအိုလံပစ်က တရုတ်-အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံပြည်သူများအကြားအပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုမြှင့်တင်ရန် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကြောင်း တရုတ်သံရုံးပြော
ရုရှားနှင့် ပြင်သစ်သမ္မတတို့က ရုရှား လုံခြုံရေး အာမခံချက် ၊ ယူကရိန်း အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်ဆွေးနွေး
အိန္ဒိယ နိုင်ငံသားတစ်ဦးကို မိသားစုပြန်လည်ဆုံဆည်းရန်အတွက် ပါကစ္စတန်က ဗီဇာ ခွင့်ပြု
ရုရှားနိုင်ငံက အီးယူတာဝန်ရှိသူများအား နိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်ခွင့်တားမြစ်
ယူကရိန်းနိုင်ငံ စစ်တပ်စက်ရုံတစ်ခုတွင် သေနတ်သမား ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လူ ၅ ဦးသေဆုံး၊ ၅ ဦး ဒဏ်ရာရ
လန်ချန်း-မဲခေါင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအထူးရန်ပုံငွေဖြင့်ဖော်ဆောင်သည့် စီမံကိန်းသင်တန်း ဖွင့်လှစ်
တရုတ်နိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်းက မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းသို့ Sinopharm ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ နှစ်သိန်းစာ လှူဒါန်းပေးအပ်
တရုတ်နိုင်ငံ အထောက်အပံ့ဖြင့် အမျိုးသားအားကစားပြိုင်ပွဲရုံ(၁) ၊ သုဝဏ္ဏ အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးနောက် လွှဲပြောင်းအပ်နှံ
တရုတ်နိုင်ငံအထောက်အပံ့ဖြင့် အမှတ် (၂) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မန္တလေး) အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်း ဖွင့်ပွဲကျင်းပ
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်က လက်နက်ခဲယမ်းစက်ရုံအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
မာလာဝီနိုင်ငံ၌ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း Ana ကြောင့် လူ ၄ ဦး သေဆုံးခဲ့ကာ နိုင်ငံတွင်း၌လျှပ်စစ်မီးပြတ်တော်မှုဖြစ်ပွား
ဆော်ဒီ နှင့် ထိုင်း နိုင်ငံတို့အကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေး အပြည့်အဝပြန်လည်ထူထောင်ရန် သဘောတူ
ဘာကီးနားဖားဆို အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က သမ္မတRoch Kaboreအား ရာထူးတာဝန်မှ ဖယ်ရှားကြောင်း ကြေညာ
ယူကရိန်း တင်းမာမှုများ ဖြစ်နေချိန်တွင် ရုရှားနိုင်ငံက ဘောလ်တစ်ပင်လယ်၌ အကြီးစား စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်
အာဖဂန်ပြည်နယ်များသို့ တရုတ်နိုင်ငံက ကူညီထောက်ပံ့သည့် စားနပ်ရိက္ခာများအား ပို့ဆောင်
လာအို-တရုတ် ကပ်ရောဂါပူးတွဲထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အစိုးရက အထူးအလေးထားကြောင်း လာအိုနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ပြောကြား
RCEP ကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးရန် ဆီးနိတ်အား ဖိလစ်ပိုင် ကုန်သွယ်ရေးအကြီးအကဲ တိုက်တွန်း
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနောက်ပါပူအာပြည်နယ်တွင် ရပ်ကွက်လူအုပ်စုများအကြား ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် လူ၁၉ ဦးသေဆုံး၊ အမြောက်အများဒဏ်ရာရ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၌ အိုမီခရွန်မျိုးဗီဇပြောင်းပိုးကြောင့် ပထမဆုံး လူနှစ်ဦး သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွား
ပြင်သစ်နိုင်ငံ၌ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် “ကျား”ပုံပါ တံဆိပ်ခေါင်းများ ထုတ်ဝေ
ရုရှားစစ်တပ် S-400 လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဒုံးကျည်စနစ်တင်ယာဉ်များ ဘီလာရုဇ်တွင် ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်ရန်အတွက် စတင်ထွက်ခွာ
ဗြိတိန်က အိုမီခရွန်ပုံစံအသစ်ကို “စုံစမ်းစစ်ဆေးရမည့် မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်” အဖြစ် အမျိုးအစားခွဲထား
မြောက်ကိုရီးယားက အရှေ့ပင်လယ်ထဲသို့ တာတိုပစ်ဒုံးကျည်နှစ်စင်းပစ်လွှတ်ကြောင်း တောင်ကိုရီးယားပြောကြား
ယူကရိန်း တင်းမာမှုများ ဖြစ်နေချိန်တွင် ရုရှားနိုင်ငံက ပင်လယ်နက်၌ အကြီးစား စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်
နေတိုးက အရှေ့ဥရောပသို့ စစ်သင်္ဘော၊ တိုက်လေယာဉ်များ ထပ်တိုးစေလွှတ်လျက်ရှိ၊ အမေရိကန်အနေဖြင့် စစ်သားအင်အားထောင်ချီ ဖြန့်ကျက်သွားနိုင်
ကင်မရွန်းနိုင်ငံရှိ အားကစားရုံပြိုကျမှုကြောင့် လူ ၆ ဦးသေဆုံး
တက္ကဆက်စ်ပြည်နယ်ရှိ ဂျူးဘုရားကျောင်းတွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသော ဓားစာခံများအားလုံးကို ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစွာဖြင့် ကယ်တင်နိုင်ခဲ့
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း သန်း ၃၀၀ ကျော်ရှိလာ ၊ အိုမီခရွန်သည် ကူးစက်ပျံ့နှံမှုကို အရှိန်မြှင့်တက်စေ
လက်တင်အမေရိက ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ၏ အဖြစ်ဆိုးနှင့် အမေရိကန် လူ့အခွင့်အရေး၏ ပုံရိပ်
လုံခြုံရေးအာမခံချက်ကို အနောက်နိုင်ငံများ လျစ်လျူရှုပါက လိုအပ်သည့် တန်ပြန်နည်းလမ်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပြောကြား
အမေရိကန်စစ်တပ်က ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းတွင် “ပြင်းထန်သော ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှု”ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဆီးရီးယားမီဒီယာ ဖော်ပြ
ယူကရိန်းမှ အမေရိကန် သံတမန်များ ထွက်ခွာမည့်အပေါ် ယူကရိန်းနှင့်ရုရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများက တုန့်ပြန်ပြောကြား
အမေရိကန်နိုင်ငံက သံရုံးဝန်ထမ်းမိသားစုများအား ယူကရိန်းနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာရန်ညွှန်ကြား
ရုရှား-ယူကရိန်း တင်းမာမှုမြင့်တက်နေသဖြင့် ဖြစ်နိုင်ခြေ တပ်ချထားမှုအတွက် အမေရိကန်က တပ်ဖွဲ့ဝင် ၈,၅၀၀ ကို အမြင့်ဆုံးတပ်လှန့်ထား
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ရန်ကုန်စတော့ခ်အိတ်ချိန်းမှ အစုရှယ်ယာ ၄၄,၀၀၀ကျာ် ရောင်းချနိုင်ခဲ့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ရွှေဈေးကွက်အတွင်း တစ်ရက်လျှင် ရွှေပိသာချိန် ၅၀ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိ
တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတွင် ယွမ်/ကျပ် တိုက်ရိုက်အသုံးပြုပေးချေမှုကို ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြု
Europe World မြန်မာ-ENG
Europe INTERNATIONAL ORGANIZATION မြန်မာ-ENG
အမေရိကန်-ရုရှား နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ ဂျီနီဗာတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
အစ္စရေး နှင့် အမေရိကန်တို့က Arrow-3 ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်ကြားဖြတ်ဟန့်တားရေးစနစ်ကို စမ်းသပ်မှုပြီးစီး
ပိုလန်နိုင်ငံ၌ COVID-19 ကပ်ရောဂါ ပဉ္စမလှိုင်းဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ဝန်ကြီးပြော
Europe Sport မြန်မာ-ENG
ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ ကြီးမားစွာအောင်မြင်မှုရရှိမည်ဟု အယ်လ်ဘေးနီးယား တာဝန်ရှိသူပြောကြား
ဟန်ကျိုး ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်ရေတပ်သင်္ဘောအုပ်စုသည် အေဒင်ပင်လယ်ကွေ့ နှင့် ဆိုမာလီ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့၌ အစောင့်အရှောက်တာဝန်များ ပြီးဆုံးပြီနောက် တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ် ကျိုးရှန်မြို့ရှိ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်းတစ်ခုသို့ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ဒုံးကျည်ဖျက်သင်္ဘော Nanjing ၊ ဒုံးကျည်ဖရီးဂိတ်စစ်သင်္ဘော Yangzhou နှင့် ထောက်ပို့သင်္ဘော Gaoyouhu တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပါဝင်သည့် ၃၈ ကြိမ်မြောက် ရေတပ်အစောင့်အရှောက်သင်္ဘောအုပ်စုသည် ကျိုးရှန်မြို့ရှိ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်းတစ်ခု၌ မေ ၁၅ ရက်တွင် ကျောက်ချရပ်နားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ် ကျိုးရှန်မြို့ရှိ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်းတစ်ခုသို့ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် ၃၈ ကြိမ်မြောက် ရေတပ်အစောင့်အရှောက်သင်္ဘောအုပ်စုအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(PLA) ရေတပ် ၃၈ ကြိမ်မြောက် အစောင့်အရှောက်သင်္ဘောအုပ်စု၏ အမှုထမ်းအဖွဲ့ဝင်များက စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုအား ဩဂုတ် ၂၇ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပြီးခဲ့သည့် ၁၈၅ ရက်အတွင်း ရေတပ်သင်္ဘောအုပ်စုသည် တရုတ် နှင့် နိုင်ငံခြား သင်္ဘော ၄၅ စင်းအား အစောင့်အရှောက် ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီး ရေမိုင် ၉၀,၀၀၀ ကျော် ရွက်လွှင့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Chinese navy fleet returns from Gulf of Aden escort missions
HANGZHOU, Nov. 15 (Xinhua) — A Chinese naval fleet Monday returned toamilitary port in Zhoushan, east China’s Zhejiang Province, after concluding escort missions in the Gulf of Aden and the waters off Somalia.
The 38th naval escort fleet, comprised of missile destroyer Nanjing, missile frigate Yangzhou, and supply ship Gaoyouhu, weighed anchor on May 15 atamilitary port in Zhoushan.
The last 185 days saw the fleet escort 45 Chinese and foreign ships and sail more than 90,000 nautical miles. ■
Photo 1 – Missile destroyer Nanjing of the 38th escort fleet of the Chinese People’s Liberation Army (PLA) Navy conductsadrill in the Gulf of Aden on June 16, 2021. A Chinese naval fleet Monday returned toamilitary port in Zhoushan, east China’s Zhejiang Province, after concluding escort missions in the Gulf of Aden and the waters off Somalia. (Photo by Wang Zongyang/Xinhua)
Photo2– The 38th naval escort fleet returns toamilitary port in Zhoushan, east China’s Zhejiang Province, Nov. 15, 2021. A Chinese naval fleet Monday returned toamilitary port in Zhoushan, east China’s Zhejiang Province, after concluding escort missions in the Gulf of Aden and the waters off Somalia. (Xinhua/Li Bingxuan)
Photo3– The 38th naval escort fleet returns toamilitary port in Zhoushan, east China’s Zhejiang Province, Nov. 15, 2021. A Chinese naval fleet Monday returned toamilitary port in Zhoushan, east China’s Zhejiang Province, after concluding escort missions in the Gulf of Aden and the waters off Somalia. (Photo by Xu Wei/Xinhua)
Photo4– Members of the 38th escort fleet of the Chinese People’s Liberation Army (PLA) Navy conductadrill on Aug. 27, 2021. A Chinese naval fleet Monday returned toamilitary port in Zhoushan, east China’s Zhejiang Province, after concluding escort missions in the Gulf of Aden and the waters off Somalia. (Photo by Liu Dongdong/Xinhua)
Photo5– Members of the 38th escort fleet of the Chinese People’s Liberation Army (PLA) Navy conductadrill on May 20, 2021. A Chinese naval fleet Monday returned toamilitary port in Zhoushan, east China’s Zhejiang Province, after concluding escort missions in the Gulf of Aden and the waters off Somalia. (Photo by Wang Zongyang/Xinhua)
စင်ကာပူနိုင်ငံက ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသော ပြည်ပခရီးသွားများဝင်ရောက်ခွင့် ၅ နိုင်ငံ ထပ်တိုး ခွင့်ပြု
“ စာသင်ခန်းဝင်ရန် အချိန်ရောက်ပြီ” ကိုဗစ်ကူးစက်နေစဉ်မှာပင် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်
တရုတ်နိုင်ငံက NATO အား ခေတ်မမီတော့သည့် စစ်အေးခေတ်အမူအကျင့်ကို စွန့်လွှတ်ရန် တိုက်တွန်း